पिपरा गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदमा २० उम्मेदवार, कुन पार्टीबाट को ? – The Public Today
पिपरा गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदमा २० उम्मेदवार, कुन पार्टीबाट को ?
विजय कुमार सिंह कात्तिक २८, २०७६ ३:०१ pm
जनकपुरधाम, कार्तिक २८ गते । महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा अध्यक्षका लागि हुन लागेको उपनिर्वाचनमा २० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
उम्मेदवारी दिएका दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जनजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, महिलालगायत सवाललाई साझा एजेन्डा बनाएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष विनोद चौधरीको निधनपछि आगामी मंसिर १४ गते हुन लागेको उपनिर्वाचनमा दलसमर्थित तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार आफ्नो एजेन्डा लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
नेकपाका उम्मेदवार विक्रम चौधरीले गाउँपालिकाको शासन व्यवस्था सुदृढ गर्ने, अस्पताल सञ्चालन गर्ने, विगही सिँचाइ योजनाअन्तर्गत सिँचाइ व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन सुरु गर्नेलगायत एजेन्डा लिएर चुनावमा उत्रिएको जानकारी दिए।
‘म पराजित भए पनि गाउँपालिका कार्यालय छेउमै कार्यालय खोलेर दुई वर्षदेखि जनताको सेवा गर्दै आएको छु, मेरो प्रतिस्पर्धा कसैसँग छैन,’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयकुमार यादव भ्रष्टाचार निर्मूल, सुशासन, शिक्षाको अवस्थामा सुधार, वृद्धभत्तामा सहजतालगायत एजेन्डा बोकेर चुनावमा होमिएको बताउँछन्। ‘जनतालाई वास्तवमा गाउँमै सिंहदरबार छ भन्ने अनुभूति दिलाउँछु। दुईवर्षे कार्यकालमा मधेसवादी दलको काम देखेर जनता निरास छन्। कुनै क्षेत्रमा केही विकास हुन सकेको छैन,’ उनले भने।
श्रीमानले देखेको सपना पूरा गर्न आफुले उम्मेदवारी दिएको राजपाकी उम्मेदवार रविता कुमारीले बताइन्। ‘शिक्षालगायत अन्य क्षेत्रमा विकास निर्माणका थुप्रै काम गर्ने सपना उहाँले देख्नुभएको थियो। ती सपना पूरा गर्न पार्टीले मलाई टिकट दिएको छ,’ उनले भनिन् ।
समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार रामजानकी यादवले सिँचाइयुक्त पिपरा, बाढीमुक्त पिपरा, विकास र समृद्धि, कमिसन तथा भ्रष्ट्रचारविरुद्ध संघर्षलगायत मुद्दा लिएर चुनाव लडेको बताए। ‘जनता हतोत्साही भएका छन्। दुई वर्षमा केही काम भएको छैन। जनतामा छाएको निरासा हटाउन चुनाव लडेको हुँ,’ उनले भने।
कुन पार्टीबाट को ?
पिपरा गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका लागि २० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। बुधवार निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा विभिन्न पार्टीबाट ११ र स्वतन्त्रमा ९ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।
प्रदेश २ संयुक्त सरकार रहेको समाजवादी पार्टी र राजपाबीच विवादका कारण दुवै पार्टीबाट अलगअलग उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। राजपाले पूर्वअध्यक्ष चौधरीकी पत्नी रविताकुमारी चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
पूर्वअध्यक्ष चौधरीको लोकप्रियता र संवेदनालाई मध्यनजर गरी उनलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको राजपा नेताहरूको भनाइ छ। तत्कालीन माओवादीबाट चुनाव लडेका रामजानकी यादव समाजवादी पार्टीबाट चुनाव लड्दैछन्।
नेकपाबाट विक्रम चौधरी, कांग्रेसबाट विजयकुमार यादव, जनमत पार्टीबाट अञ्जनीदेवी मण्डल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट इसराजुल दुनिया, नेपाल जनता पार्टीबाट रामाकान्त झा, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीबाट राजकिशोर यादवव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट श्यामसुन्दर चौधरी, ऐतिहासिक प्रजातन्त्र पार्टीबाट श्यामसुन्दर चौधरी, ऐतिहासिक प्रजातन्त्र पार्टीबाट शुकराम यादव, राप्रपा संयुक्तबाट सुनिल ठाकुरले उम्मेदवारी दिएका छन्।
यस्तै, स्वतन्त्रबाट किशोरी यादव, गणेशकुमार यादव, पुनित अधिकारी, प्रदिपकुमार यादव, प्रवीण चौधरी, रन्जितकुमार झा, रामवृक्ष यादव, शैलदेवी मणडल र सञ्जयकुमार यादवले उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
यस्तो छ समीकरण
स्थानीयका अनुसार उपनिर्वाचनमा नेकपा, राजपा, समाजवादी पार्टी र काँग्रेसबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचन लडेका विक्रम चौधरी झिनो मतले मात्र पराजित भएका थिए।
गाउँपालिकामा करिब १८ हजार मतदाता छन्, जसमध्ये पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेले करिब १ हजार ९ सय, समाजवादी पार्टीले ८ सय, तत्कालीन माओवादीले करिब १५ सय र राजपाले २ हजार ८ सय मत ल्याएका थिए। माओवादीबाट समेत उम्मेदार लडेका कारण पछिल्लो निर्वाचनमा मत विभाजन भएको थियो।
यसपालि, एकत्रित नेकपाका उम्मेदवार विक्रम चौधरी बलियो देखिन्छन्। स्थानीयका अनुसार कांग्रेसका उम्मेदवार विजय यादव गाउँमा खासै नबस्ने हुँदा उनको व्यक्तिगत पकड खासै छैन। समाजवादी पार्टीले पछिल्लोपटक संगठन बलियो बनाउन प्रयास गरेका कारण रामजानकी यादवको व्यक्तिगत साथै संगठनको हिसाबले समेत गाउँपालिकामा राम्रै पकड छ।
तर, गाउँपालिकामा जातीय समीकरणले भने ठूलो अर्थ राख्छ। भूमिहार जातिको भोट गाउँपालिकामा निर्णायक हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्।
राजपाकी उम्मेदवार रविता चौधरी मुख्य प्रतिस्पर्धीमध्ये एकमात्र अनुहार भूमिहारबाट लडेकाले उनलाई समेत कमजोर आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन।